warkii.com » Miyuu Karan Johar sii qorsheeyay booska uu Bollywood ku yeellan doono wiilka uu Amitabh Bachchan awoowga u yahay ee Agastya Nanda?
Miyuu Karan Johar sii qorsheeyay booska uu Bollywood ku yeellan doono wiilka uu Amitabh Bachchan awoowga u yahay ee Agastya Nanda?
Kaddib markii uu geeriyooday Sushant Singh Rajput, Director Karan Johar ayaa wajahay weerarro kala duwan iyo eedeymo ku aaddan inuu gacan qabto kaliya xiddigaha ka dhashay qoysaska awoodda ku leh Bollywood-ka, waxaana u baxday naaneysta xanafta leh ee ‘Mafia of Bollywood’.
Wararkii ugu dambeeyay ee laga helay dalka India ayaa sheegaya in Karan uu hadda qorsheynayo sidii uu usoo saari lahaa wiilka uu Amitabh Bachchan awoowaha u yahay ee Agastya Nanda.
Agastya waxaa dhashay Amitabh gabadhiisa Shweta Bachchan Nanda taasoo ah qoraa , sidoo kalena horay u ahaan jirtay Model, iyadoo hadda wiilkeeda uu caan ka yahay baraha bulshada, xilli waqti fasax ah uu ku qaadanayo guriga awoowgiis ee ku yaalla magaalada Mumbai, waxaana la xasuustaa dhowaan inuu kasoo muuqday xafladda dhalasha ee Neetu Kapoor oo ah hooyada dhashay Ranbir Kapoor iyo xaaskii hore ee Rishi Kapoor.
Wiilkan dhallinta yar ayaa ku riyoonaya inuu noqdo jilaa sida awoowihii iyo abtigii Abhishek, waxaana uu hadda sameynayaa jir dhis aan caadi ahayd iyo tababarro jilliin ah, waxaana majaladda Mumbai Mirror laga soo xiganayaa in filim sameeye Karan Johar uu durba yabooh hordhigay Agastya si uu u soo saaro filimka uu ku soo caan baxayo.
Si kastaba ha ahaatee, illaa iyo hadda ma jirto xaqiijin ku aaddan yaboohan kuwaasoo ka imaanaya ilo lagu kalsoonaan karo.